Ciidamadda Itoobiya oo Dad Shicib ah ku dilay degmadda Baladweyne iyo Qarax lala beegsaday | Berberanews.com
Home WARARKA Ciidamadda Itoobiya oo Dad Shicib ah ku dilay degmadda Baladweyne iyo Qarax...
Ciidamadda Itoobiya oo Dad Shicib ah ku dilay degmadda Baladweyne iyo Qarax lala beegsaday
Baladweyne-(Berberanews)- Ciidamada Itoobiya ee degmada Baladweyne ku sugan ayaa toogasho ku dilay maanta saddex qof oo rayid ah. Kaddib markii lagula eegtay badhtamaha degmadaas qarax miino oo ah kuwa dhulka lagu aaso, taasoo aan la ogeyn khasaaraha ka soo gaadhay.
Goob-joogayaal ku sugan Baladweyne ayaa sheegay inay arkeen laba askari oo ka tirsan ciidamadii Itoobiya oo dhulka yaalla, balse lama oga inay dhaawacmeen iyo inay dhinteen, iyadoo xilliga uu qaraxu dhacayay ay ciidammo Itoobiyaan ahi lugeynayeen gudaha degmada. “Markii uu qaraxu dhacay kaddib ciidamada Itoobiya waxay eryadeen nin cararaya iyagoo ku toogtay afaafka hore ee guriga uu doonayay inuu galo, iyagoo markaas kaddib gudaha u galay gurigii halkaasoo ay ku dileen laba qof oo kale.” ayuu yidhi goob-jooge ku sugan Baladwyene.
Ciidamada Itoobiya ayaa gallinka hore ee maalin walba biyo ka dhaansada degmada gudaheeda iyadoo magaaladu ay xilligaas tahay mid xidhan oo la ogoleyn inay dadku sameeyaan dhaqdhaqaaq, waxaana mas’uuliyadda weerarka sheegtay Malleeshiyaadka Al-Shabaab.
Maamulka gobolka Hiiraan ee dawladda ku-meel-gaadhka ah ee Soomaaliya ayaa ka hadlin weerarka miino ee ciidamada Itoobiya lagu qaaday, waxaana dhowr jeer oo hore ciidamada Itoobiya ee Baladweyne ku sugan lala beegsaday qaraxyo noocan oo kale ah.
Degmada Baladweyne ayaa waxay ciidamada Itoobiya iyo kuwa maamula Dooxada Shabeelle ay kala wareegeen xoogaggii malleeshiyaadkii Al-Shabaab ee ka talinayay, iyadoo tan iyo xilligaas ay ka dhacayeen qaraxyo lala beegsanayo ciidamada Itoobiya ee ku sugan Baladweyne.
Previous articleGarsoore Marriner oo dhexdhexaadin doona kulanka Man Utd v Man City
Next articleXukuumadda oo Sicir-bararka Shidaalka ku sababaysay Cabsida dhinaca Budhcad-badeedda ka soo food-saartay Maraakiibta Somaliland u raran